क्रसकाल Core-X4: एक सबै इलाका स्मार्टफोन [समीक्षा] | ग्याजेट समाचार
मोबाइल फोनमा सबै कुरा ग्लैमर, घुमाउरो पर्दा, फैलिएको क्यामेरा र एक नाजुक र रंगीन डिजाइन हुँदैन। त्यहाँ फोनहरूको ख्याल लिएर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न नसक्नेहरूका लागि डिजाइन गरिएका यन्त्रहरूको श्रृंखलाहरू छन्, जो जोखिमपूर्ण गतिविधि वा मेहनत गर्छन्, हामी यसका बारेमा कुरा गर्छौं 'rugerized' फोन वा अल्ट्रा-प्रतिरोधी। म तिनीहरूलाई एसयुभी भन्न चाहान्छु, किनकि जब म यी मध्ये एक देख्छु क्लासिक ल्याण्ड रोभर × × of आयरल्याण्डको पहाडबाट भएर जान्छु।
नयाँ क्रसकोल कोर-एक्स4एक्चुलिडाड ग्याजेट परीक्षण प्रयोगशाला, ठूलो सुविधाहरूसहितको मोबाइल मार्फत जाँदैछ तर ... अविनाशी? हामी यसलाई जाँच गर्दछौं।
1 डिजाईन: लडाईका लागि तयार
3 क्यामेरा र स्क्रीन
4 हामी प्रतिरोधको बारेमा कुरा गरौं
डिजाईन: लडाईका लागि तयार
फोनको पर्याप्त आकार छ, विशेष गरी मोटाईको स्तरमा, यस प्रकारको उपकरणमा केहि सामान्य। हामीसँग कुल २२61 ग्रामको लागि x१ x ime 78 x १ mill मिलिमिटर छ, यो हल्का वा पातलो छैन, तर यो पनि हुँदैन, गिरावट हुँदा विकृति वा क्षतिबाट बच्न यो पर्याप्त दृढ हुनुपर्दछ। हामी धातु, प्लास्टिक र रबराइज्ड बीचको कम्पेडियम पाउँछौं जुन स्पष्ट रूपमा प्रतिरोधको घमण्ड गर्दछ। हामीसँग दायाँ पट्टि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, भोल्यूम नियन्त्रण र अनुकूलन योग्य मल्टि फंक्शन बटन छ जुन अर्को साइडमा पनि अवस्थित छ।
मोर्चामा हामी प्यानल को रक्षा गर्न प्रमुख फ्रेमहरु छ। पछाडि आक्रामक एles्गलहरू सहित छोडियो, विशेष एक्स-लिंक कनेक्टर र एकल सेन्सर क्यामेरा जुन फैलदैन। यो एक्स-लिंक म्याग्नेटिक कनेक्टर एक सफलता हो, यसमा चार्ज र ट्रान्सफरको सम्भावना छ, साथ साथै मोबाइलको स्थान सुरक्षित गर्न लक गर्दैछ र मैले यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो भएको पाएको छु र क्रसकल कोर-एक्सaमा भिन्नता सुविधा प्रदान गर्दछ जुन यसले यसलाई दिन्छ। थपिएको मान। यस एक्स-अवरोधकको साथ हामीसँग धेरै प्रकारका उत्पादनहरू छन् जुन हामी खरीद गर्न सक्दछौं हार्नेस, पोर्ट चार्जिंग आदि ... अनुभव पूरा गर्नका लागि।
हामीले मान्यता प्राप्त प्रोसेसरको साथ टेक्निकल सेक्सन शुरू गर्यौं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450२, यद्यपि यो शक्ति र स्वायत्तताको हिसाबले तल्लो-मध्य दायरामा छ। यससँग GB जीबीको र्याम छ, दैनिक कार्यहरूको लागि पर्याप्त निष्पक्ष, त्यसैले हामीसँग भिडियो खेलहरूको सर्तमा प्रदर्शनको बारेमा कुनै प्रकारको ढोंग गर्नु हुँदैन। आधार भण्डारण GB२ जीबी को छ तर माइक्रोएसडी कार्डले 32१२ जीबी सम्म विस्तार योग्य छ, पर्याप्त मानक भण्डारण, तर एक भिन्न कारक पनि होइन। टेक्निकल सेक्सनमा हामीसँग एन्ट्री-स्तर एन्ड्रोइड टर्मिनलहरूको लागि आफ्नै हार्डवेयर छ।
हामी यसको अलि अनुकूलित संस्करण चलाउँछौं Android .9.0 .० पाई, २०१ of को शुरुवातबाटको संस्करण, हालको संस्करण थप मापदण्ड गरिएको एन्ड्रोइड १०। यसको अंशका लागि हामीसँग टेलिकम्युनिकेशनको सर्तमा G जी जडान छ, ताररहित ब्लुटुथ 4.2.२, डुअलसिम क्षमता, एफएम रेडियो र उदाहरणका लागि हामीसँग mm.mm एमएम ज्याक उपलब्ध छ, केहि हालको फोनमा हराइरहेको छ। यो पनि नोट गर्नुपर्दछ कि माइक्रोएसडीले माइक्रोएसआईएम स्लट ओगटेको छैन र यो सराहनीय छ। निश्चित रूपले प्राविधिक सेक्सनमा, यो क्रसकाल Core-X3,5 एक प्राविधिक आश्चर्य होइन यदि हामी के चाहन्छौं भिडियो गेमहरू निचोरेज बनाउने हो वा जस्तो, यो पनि यसको लागि डिजाइन गरिएको छैन। हामी यो पनि उल्लेख गर्दछौं कि हामीसंग NFC छ, कि हामी विभिन्न प्लेटफार्महरु संग सम्पर्क रहित भुक्तान गर्न सक्छौं।
क्यामेरा र स्क्रीन
हामीसँग प्यानल छ पारंपरिक १:: aspect पक्षमा HD + रिजोलुसनको सुविधा रहेको .5,45..18 इन्च IPS LCD। यो स्क्रीन द्वारा कभर गोरिल्ला ग्लास3यसमा जिज्ञासु सुविधाहरू छन् जस्तै भिजेको बेलामा प्रयोग हुने सम्भाव्यता र यसलाई ग्लोभहरूसँग प्रयोग गर्दा (यो भिजेको बेला लक हुन्छ)। हामीसँग राम्रो फिट, फ्ल्याट प्यानेल जसले यसलाई रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ, र बाहिरी प्रयोगको लागि पर्याप्त ब्राइटनेस र रंग अनुपात। स्पष्टतया यो प्यानल हो जुन फुलएचडी रेजोलुसनमा पुग्न सक्दैन, त्यसैले हामी मल्टिमेडिया सामग्री खपत गर्दा आश्चर्यको आशा गर्न सक्दैनौं।
क्यामेरा को रूपमा, फ्यूजन 48 प्रसंस्करण प्रणालीको साथ एक 4MP सेन्सर। राम्रो प्रकाशको साथ पारम्परिक फोटोग्राफिक शटहरूको लागि परिणाम पर्याप्त छ। वस्तुहरू स्पष्ट रूपमा परिवर्तन हुन्छ जब प्रकाश खस्दछ, जबकि छवि प्रसंस्करणले प्रतिकूल परिस्थितिहरूको बिरूद्ध लडाई गर्दछ। निश्चित रूपमा क्यामेरा आवश्यक शटहरूको लागि पर्याप्त छ, यसको मजामा ध्यान केन्द्रित नगरी। हामीले H० एफपीएसमा एफएचडीमा भिडियो क्याप्चर गर्न सफल भयौं। यसको अंशको लागि, MP एमपी फ्रन्ट सेन्सरले हामीलाई समस्याबाट निकाल्छ र भद्र तस्वीरहरू लिन्छ। हामी तपाइँलाई तल क्यामेरा परीक्षण छोड्दछौं:
हामी प्रतिरोधको बारेमा कुरा गरौं
हामीसँग IP68 पानी र धुलो प्रतिरोध छ, तर यो आफैंले तपाईंलाई धेरै भन्न सक्दैन, र त्यहाँ यस उपकरणको केहि बजारमा पहिले नै उपकरणहरू छन्। जे होस्, हामी कुरा गर्दा चीजहरू परिवर्तन हुन्छन् मिल STD810G प्रतिरोध, यस प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न उपकरण तेह्र प्रतिरोध परीक्षणको अधीनमा छ। यो त्यसपछि कम्तिमा 2० सेकेन्डको लागि प्राय तरलमा २ मिटरसम्म डुब्न सकिन्छ। दुई मिटरसम्मको छ-पक्षीय ड्रपमा पनि यो परीक्षण गरिएको छ चरम तापमान -२ººC देखि + º०ºC सम्म रफिलिंग बिना।
हाम्रो परीक्षणहरूले यस उपकरणमा तार्किक तनाव सिर्जना गरेको छ, सँधै क्षति निम्त्याउने मनसाय बिना नै। हामीले अवक्षेपण र "भिजेको" बनायौं जुन एक सुसंगत स्थितिमा हुन सक्छ जुन यसलाई अपूरणीय देखाइएको छ। थप रूपमा, तिनीहरूको माइक्रोफोनले "गोर" सील प्रमाणित गरेको छ।। जे भए पनि, हाम्रो परीक्षणले उनीहरूलाई प्रतिरोध स्तरमा नोटको साथमा पार गर्यो, यो राम्रो विकल्प देखिन्छ यदि हामी खोजिरहेको कुरा लडाई उपकरण हो भने, प्रतिरोधी, चरम खेलहरू गर्ने वा सम्झौतापूर्ण परिस्थितिहरूमा काम गर्नेहरूको लागि डिजाइन गरिएको जुन प्राय जसो अवस्थामा धेरै परम्परागत उपकरणहरूको जीवन समाप्त हुन्छ।
हामी हार्डवेयरको सर्तमा सामान्य प्रदर्शनका साथ टर्मिनलमा छौं तर यसको अंशको लागि केहि केहि छैन "rugerized" विशेषताहरु जहाँ यो बाहिर खडा, यसको हुनुको वास्तविक कारण। यद्यपि पहिलो बाधा मूल्यमा फेला पार्न सकिन्छ। समान सुविधाहरूका साथ अधिकांश उपकरणहरूको पनि समान मूल्य हुन्छ, chosen450० यूरो छनौट गरिएको दृष्टिकोणको आधारमा (LINK).
X-Link र X- ब्लक प्रणाली धेरै विकल्पहरूको साथ
एक डिजाइन र प्रतिरोध ग्यारेन्टीहरू जुन मिल्दो छ
जडान र थप विकल्पहरू
ती हार्डवेयरमा राम्रो शर्त बनाउन सक्दछन्
मूल्य यी सुविधाहरूमा अलि बढी समायोजित गर्न सकिन्छ
म एन्ड्रोइड १० लाई सम्झिन्छु
एल प्याकेट इन्क्लुए: हेडफोन, केबल, चार्जर, एक्स-ब्लकर र उपकरण। तपाईंले यसको दुबै पक्षलाई तोक्नुपर्नेछ, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि हामी यो लिखित समीक्षाको साथमा भएको भिडियोमा एक नजर राख्नुहोस् ताकि तपाईं निर्णय लिन सक्नुहुन्छ।
क्रसकाल Core-X4 खरीद गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » क्रसकाल Core-X4: एक अफ-रोड स्मार्टफोन [समीक्षा]